Flippies: Mbughari nke teknụzụ nke narị afọ gara aga | Martech Zone
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ bụ otu n'ime ụzọ izizi nke ihe taa a na-akpọ mmekọrịta multimedia ma patenti ha na United States na 1882! Zipu Nkpirisi a video na a logo, na ha ga-enyere ike mmekọrịta mmekọrịta na ha na-akpọ ahia aka. Iwu kacha nta bụ akwụkwọ mpịakọta 2,500 - mana kedu ụzọ kacha mma iji gosi ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ akara gị. Akwụkwọ mmado na-eme ọmarịcha mpempe akwụkwọ mmekọrịta mmekọrịta ma ọ bụ ihe ngosi ahia.
Ma ọ bụ pistachios, Jeeps, ese foto ma ọ bụ tii ite… e nwere n'ezie ihe dị jụụ na pụrụ iche banyere flipbook technology ka a visual nkọwa gafee na a ntuziaka mpempe mmekọrịta media na mmadụ nwere ike na-ha. Enweghị mkpa ngwa mgbakwunye, budata, ma ọ bụ wụnye… naanị ịme mkpịsị aka gị dị njikere ma laa!
Tags: flip akwụkwọakwụkwọ mpịakọtaflippịakụkọ ihe mere ememmekọrịta multimedia